बडोना, एक रोमन भूत देखि एक पर्यटक उपस्थित | यात्रा समाचार
लुइस मार्टिनो | 04/04/2021 15:30 | अद्यावधिक गरियो 06/04/2021 17:04 | स्पेन शहरहरू, के हेर्ने
बडोनालाको ती क्षेत्रहरु मध्ये एक ठूलो शहर को विस्तार द्वारा अवशोषित ती क्षेत्रहरु मध्ये एक हुनुको विचित्रता छ। बार्सिलोना। यद्यपि यो स्वतन्त्र नगरपालिका र चौथो जनसंख्या भएको शहर हो Catalonia.
यसका साथै, यसको उत्पत्ति सबैभन्दा निरपेक्ष पुरातन समयको हो, द्वारा देखाइएको इबेरियन र लेयटान बाँकी छ उनीहरूको वातावरणमा पत्ता लगाइयो। यद्यपि यो शहरको रूपमा सिर्जना गरिएको थियो रोमीहरू को नाममा लगभग १०० ईसा पूर्व बेतुलो। वास्तवमा यो शहरले स्पेनमा ल्याटिन युगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पदा पनि पाएको छ। यदि तपाईं बडोनाको बारेमा बढि जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्न हौसला दिन्छौं.
1 बडोनामा के हेर्ने
1.1 पन्ट डेल पेट्रोली, शहरको प्रतीक
1.2 सन्त जेरोनि डे ला मोर्ट्रा मठ
1.4 पार्कहरू, Badalona को प्रामाणिक हरियो फेफ
1.5 समुद्र तटहरू
1.6 Dalt de la Vila को छिमेक
1.7 Badalona को संग्रहालय
1.8 हाउस अफ डल्फिन र बगैचाको क्विन्टो लाइकिनिस
बडोनामा के हेर्ने
निश्चित रूपमा रोमन अवशेषहरू क्याटालान शहरको एक ठूलो आकर्षण हो। र तिनीहरूको छेउमा, शानदार समुद्र तटहरू, सुन्दर पार्कहरू र स्मारकहरूको राम्रो सेट। हामी यी सबै रूचिकार ठाउँहरू भ्रमण गर्नेछौं।
पन्ट डेल पेट्रोली, शहरको प्रतीक
पन्ट डेल पेट्रोली र एन्सेस डेल मोनो कारखाना
यो फुटब्रिज, जुन २ into० मिटर समुद्रमा जान्छ, हाल यी मध्ये एक हो प्रतीकहरू क्याटालान शहरबाट। यो १ 1965 inXNUMX मा ठूला तेल ट्याkers्करहरूको लागि यस कारकको लागि निर्माण गरिएको ट्या in्कीमा उनीहरूको कार्गो छोड्नका लागि निर्माण गरिएको थियो।
एक जिज्ञासाको रूपमा, हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि यस पुल २००१ मा ध्वस्त हुने थियो, तर यसलाई पेस्ट्री शेफको नेतृत्वमा बडोनाबाट आएका व्यक्तिहरूको समूहले ध्वस्त पार्नबाट बचाएको थियो। जोसेप भल्लहरू। हालसालै तपाईलाई अभ्यास गर्न यो उत्तम क्षेत्र हो स्कुबा डाइभि र, सबै भन्दा माथि, तपाईं रमाईलो टहल गर्न को लागी अद्भुत सूर्यास्त.
सन्त जेरोनि डे ला मोर्ट्रा मठ
तपाईले यो मठ राजमार्गको अर्को तर्फ फेला पार्नुहुनेछ। यो एक हो गथिक गहना बार्सिलोना प्रान्तको। यसको पहिलो निर्माण १२ औं शताब्दीको हो, यद्यपि पछि यसलाई कलिस्टर, एउटा चर्च, भान्छा र एउटा भाँडो जोडेर विस्तार गरियो। यो पनि हाइलाइट बचाव टावर जुन समुद्री डाकूको आक्रमणबाट समुद्री किनारबाट बच्न प्रयोग गरिएको थियो।
एन्सेस डेल मोनो कारखाना भित्र
क्याटालान शहरले तपाईंलाई १ th औं शताब्दीको बखत विकसित हुने क्रममा विशाल औद्योगिक सम्पदा पनि प्रदान गर्दछ। यी भवनहरू बीच बाहिर खडा छ Anís del Mono को पुरानो कारखाना, जुन आज यो पेयको परम्परागत विस्तारको बारेमा संग्रहालय हो।
यो पनि भेट्न लायक छ वाणिज्य र उद्योग को सहयोगी कम्पनी को कारखाना, एक आधुनिकतावादी भवन द्वारा १ 1899 in मा निर्मित Jaime Botey i Garrigaजो शहरको मेयर पनि थिए। भवन निर्माण गर्न को लागि निर्धारित थियो हास्य संग्रहालय। जबकि, परियोजना अस्थायी रूपमा रोकिएको छ।
पार्कहरू, Badalona को प्रामाणिक हरियो फेफ
Can Solei i Ca l'Arnús पार्क
कातालान शहरको ठूलो आकर्षण मध्ये यसको ठूलो संख्यामा पार्कहरू छन्। कूल Hect hect हेक्टर शहरको हरियो क्षेत्र र यसको बासिन्दाहरूको लागि प्रामाणिक फोक्सो हो। ती मध्ये Can Solei and Ca l'Arnús पार्क। यो प्रामाणिक वानस्पतिक बगैचामा ताल र एउटा सानो महल पनि छ, टावरहरू त्यस्तै हेर्नुहोस् र पानी र एक ग्रोटो पनि।
यससँगै शहरका अन्य पार्कहरू पनि छन् त्यो टुरो डि कार्टिग, पहाडमा अवस्थित; एक मोन्टीगाले बाट, एक हिँड्न को लागी उत्तम; ग्रान सोल को, केहि एशियाई प्रजातिहरूको साथ; नुएभा लोररेडाबाट एक, खेलकुद उपकरणको साथ, र कासा बार्रिगाबाट एक.
बार्का मारिया समुद्री किनार
शहर छ समुद्री तटको पाँच किलोमिटर तपाईंसँग नहाउने र सबै भन्दा राम्रो उपकरणहरूको मजा लिनको लागि उत्तम शर्तहरू हुन्छ त्यसैले तिनीहरूलाई तपाईंको भ्रमण आरामदायक होस्। यी मध्ये, हामी समुद्र तटहरूको उल्लेख गर्नेछौं बार्का मारियाको, डेल क्रिस्टल, माछावाला, स्टेशन को y डे ला मोरा.
Dalt de la Vila को छिमेक
यो शताब्दीयौंसम्म शहरको वास्तविक स्नायु केन्द्र, बडोनाको पुरानो शहरलाई दिइएको नाम हो। मानौं कि यसमा तपाईसँग धेरै सुन्दरताको स्मारकहरू छन्। ती मध्ये, रोमन एम्फीथिएटरको अवशेष en क्यारर डि लेस एरेस.
तर सबै भन्दा, बहुमूल्य सान्ता मारियाको चर्च, एक प्रभावशाली पुनर्जागरण fçade र एक भव्य घंटी टावर संग। र, यो धेरै नजिक छ, Torre Vella, १ wonderful औं शताब्दीदेखि नै अद्भुत हवेली-प्रकारको दरबार। यसको प्लेटेस्क्यू फाउडे र यसको गोथिक तहखाने यसमा बाहिर खडा छन्।
अन्त्यमा, शहरको पुरानो भागलाई यसका कुख्यात घरहरू न्युन्सिस्टा र मोडर्नस्टा शैलीमा नहेर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, Ca l'Amigó, Clapés गर्न सक्नुहुन्छ र घर योजनाहरु.
Badalona को संग्रहालय
Badalona संग्रहालय टुक्रा
हामीले तपाईंलाई पहिले नै क्याटालान शहरको माटो मुनि भेटिएका महान पुरातात्विक सम्पदाको बारेमा बताइसकेका छौं। यी अवशेषहरूको एक राम्रो हिस्सा प्रभावशाली संग्रहालयमा उजागर गरियो जुन तपाईंलाई सडकमा सवारी गर्दछ बेतुलो ईसापूर्व १ शताब्दीमा
यसको लगभग 3400 XNUMX०० वर्ग मिटरमा प्रदर्शित केही रत्नहरू हुन् तातो स्प्रिंग्स, the दशमानस वा मुख्य सडक र, माथि सबै भन्दा माथि बडोनाको शुक्रशहरको स्थापनाको समयदेखि २ 28 सेन्टिमिटरको मूर्ति।
हाउस अफ डल्फिन र बगैचाको क्विन्टो लाइकिनिस
संग्रहालयको प्रवेश संग तपाईं पनि यी दुई सुविधाहरू भ्रमण गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नुहुन्छ। को डल्फिन हाउस यो भूमिगत पनि हो र बहुमूल्यको नाममा राखिन्छ डल्फिन मोज़ेक तिनीहरूले वर्षा पोख्न आफ्नो पोखरीको सजावट गर्छन्। यो एक विशाल थियो डोमस लगभग आठ सय मिटरको रोमन टावर, यद्यपि आज तपाईं केवल तीन सय देख्न सक्नुहुन्छ।
यसको भागको लागि क्विन्टो लाइकिनिसको बगैचा यसले तपाईंलाई अलिक निराश पार्दछ। आज तपाईले जे देख्नुहुन्छ त्यो एक प्रकारको पोखरी हो जुन त्यसको समयमा बोटबिरुवा र फूलहरूले भरिएको हुनुपर्दछ। जे होस्, तपाईले यो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यो कस्तो थियो भर्चुअल मनोरन्जन सुविधा द्वारा प्रस्ताव गरिएको। यो ठाउँमा, तबूला अस्पतालिस, एक प्रकारको अनुबंध जसले पुष्टि गर्यो पाँचौं लाइसिनिस बेतुलोको रक्षकको रूपमा र तपाईंले संग्रहालयमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ।
बडोनाको रोमन विगतको कुरा यत्तिको महत्त्वपूर्ण थियो कि, प्रत्येक बर्ष, शहरको विकास हुन्छ म्याग्ना सेलेब्रियो, यस समयमा ल्याटिन सेनाहरू यसको सडकहरूमा हिंड्छन् र समयका कारीगरहरूको ठाउँहरू यसको कुनामा राखिन्छन्।
अन्तमा, यसले तपाईंलाई धेरै प्रदान गर्दछ Badalona। यसको महत्त्वपूर्ण रोमी सम्पदामा तपाईंले बहुमूल्य स्मारकहरू, ठूला पार्कहरू र अद्भुत तटहरू थप्नु पर्छ। यदि तपाईं यस शहरको भ्रमण गर्नुहुन्छ भने, तपाईंलाई पछुताउनु पर्दैन। साथै, यदि तपाइँ अन्य गतिविधिहरू पूरा गर्नको लागि तपाइँको यात्राको फाइदा लिन चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो सल्लाह लिनुहोस् क्याटालोनियामा सबै भन्दा राम्रो पानी पार्कहरूको सूची.
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » स्पेन शहरहरू » Badalona